Ku hel kan ugu fiican labada adduunba Yammer meheraddaada
La shaqeynta Yammer
Sabtida, Juun 23, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Kahor wadahadalkeenii jimcaha ee Harold Jarche, weligay ma maqal ereyga shaqo. Tan iyo bishii Sebtember ee la soo dhaafay, wakaaladeena suuq-geynta ee gudaha ayaa la caddeeyay JOOJI goobta shaqada. ROWE waa Natiijooyinka Kaliya Shaqada Deegaanka… mid shaqaaluhu awood u siiyo inay shaqeeyaan sida ay rabaan ilaa inta shuruudaha shaqada la dhammaystirayo.
Koox yar ahaan, hal caqabad oo aan ku leenahay ROWE ayaa ah isgaarsiinta midba midka kale. Qaarkeen waxay ku jawaabaan emayl, qaar taleefan, qaarna haba yaraatee (aniga oo kale!). Markaan hoos u foorarsado shaqadayda, si daacadnimo ah waan necbahay carqaladeynta. Laakiin taasi cadaalad kuma aha macaamiishayda ama shaqaalahayga… kuwaas oo mararka qaar isku dayaya inay i raadiyaan.
David wuxuu ogaaday arimaha ururada kale ee lumiya wax soo saarkii emayl badan iyo shirar aad u tiro badan… oo aan u ogolaanin shaqaaluhu inay si dhab ah u qabtaan howlaha horyaala Wuxuu sheegay in ururada qaar ay u weecdeen dhanka shaqada. Si fudud haddii loo dhigo, Hawsha shaqada waxay bixisaa hab isgaarsiineed oo aan carqalad ku ahayn shaqaalaha laakiin wali u oggolaaneysa kuwa kuu dhow inay fahmaan waxa aad ka shaqeyneyso, goorta aad u baahan tahay caawimaad, iyo goorta aad rajaynayso natiijooyin. Waxay u muuqataa taas Yammer waxay u noqon kartaa qalab weyn tan!
Ku saabsan Yammer
Yammer waa fududahay in la isticmaalo haddana xoog-yar oo adeegsiga aaladda wax ku qorta ee isku xidha dadka iyo waxyaabaha ku jira waqtiga iyo bannaan. Waxay u shaqeysaa si la mid ah Facebook ama Twitter, farqiga u dhexeeya ayaa ah in iyadoo Facebook ay adeegsaneyso aagagga dadweynaha, Yammer wuxuu si gaar ah ugu shaqeeyaa ganacsiga, isagoo u oggolaanaya shirkaduhu inay u habeeyaan softiweerka isku xidhka bulshada ee isku xidhka shaqaalaha, la-hawlgalayaasha kanaalka, macaamiisha iyo kuwa kale ee qiimaha leh Silsilad.
Xarun bulsho oo gaar loo leeyahay sida Yammer waxay shirkaddu siisaa faa iidooyin badan. Waxay ku hawlan tahay oo awood siineysaa shaqaalaha, waxay dardargelineysaa howlaha shaqada, waxay hagaajineysaa wax soosaarka waxayna sii shidayaan hal-abuurnimada. Iyo natiijooyinka ku dhow dhow. Tusaale ahaan, Yammer wuxuu siiyaa qalab iskaashi joogto ah oo hufan si loogu xiro hibada iyo teknoolojiyada ku baahsan adduunka oo dhan kooxda iibka iyo suuqgeynta, taas oo u oggolaaneysa inay ku lug yeeshaan istiraatiijiyado ayna bilaabaan ololeyaal si habsami leh.
Walaaca ugu weyn ee laga qabo baraha ay ku wada xiriiraan bulshada ayaa ah amniga xogta. Iyada oo barta kaliya ee Yammer lagu kala duwanaan karo (barta Facebook iyo bogagga kale ee xiriirka, taasi waa) asturnaanta iyo badbaadada xogta, bogga wuxuu marayaa masaafadaas dheer si loo hubiyo amniga darajada ugu sarreysa. Yammer wuxuu isku darayaa dib u eegista amniga qaabeynta, noocyada, iyo wejiyada howlgelinta. Dhammaan isku xirnaanta waxay maraan SSL / TLS, xogtuna waxay ku socotaa dab-damisyo caqli-gal ah oo heerkoodu hooseeyo si looga hortago inay ku soo daadato shabakadaha oo dhan. Adeegyada shabakadda ayaa wali jidh ahaan iyo si macquul ah uga soocan server-yada xogta. Ilaalintani, oo ay weheliso socodsiinta kale ee howlaha amniga millatariga sida kormeerka fiidiyaha saacadaha, biimetirrada iyo qufulka ku saleysan, kontaroolada marinka adag ee shaqaalaha, diiwaangelinta soo booqdayaasha oo faahfaahsan, hal-gelitaan iyo siyaasado sir ah oo aamin ah, xaqiijin xoog leh iyo inbadan oo la hubiyo amniga darajada.
Ku noqo Shaqada. Marka la eego caqabadaha mudnaantayada kala geddisan, jadwalka, goobaha iyo dhaqanka shaqada… isticmaalka Yammer wuxuu noqon karaa hab fiican oo aan dhammaanteen ku wada socon karno midba midka kale. Halkii aan u wici lahaa horumariyehayga, waxaan iska hubin karaa Yammer oo aan arki karaa waxa ku jira ama goorta la heli karo! Tani faa'iido uma lihid ganacsiga yar… bal qiyaas is-gaadhsiinta kordhay iyo yaraynta buuqa ay shirkaddu yeelan karto sidoo kale!
Yammer sidoo kale wuxuu leeyahay labadaba desktop iyo codsiyada moobiilka la heli karo, isdhexgalka Skype, iyo tan astaamo kale ah.
Tags: isgaarsiinta bulshadashaqoisbedel
Badgeville: Dhiirigelinta Isbedelka Habdhaqanka iyadoo loo marayo Gamification
Jun 25, 2012 at 4: 15 PM
Warar xiiso leh maanta oo Microsoft ay iibsatay Yammer. Waxaan u maleynayaa inay tahay tallaabo weyn!
Jun 26, 2012 at 10: 49 PM
Waa inaan dhahaa - Runtii aad ayaan ugu raaxeysanayaa isticmaalka aaladdan. Waxa kaliya ee aan u baahnaa waxay ahayd riixitaanka. Wuxuu joojiyaa emaylka, wuxuu ogeysiiyaa asxaabtaada, wuxuuna kusii hayaa mashaariicda. Waa sida Facebook, laakiin kaliya loogu talagalay goobta shaqada!